Wafti uu Hogaaminayo Dr. Glaydh oo Gaadhay Addis Ababa – Rasaasa News
Feb 3, 2012 addis ababa, ethiopia, somalia, Somaliya, taleex, Wafti uu Hogaaminayo Dr. Glaydh oo Gaadhay Addis Ababa
Addis Ababa, Feb 3, 2012 [ras] – Wafti balaadhan oo uu hogaaminayo Dr. Cali Khaliif Galaydh, aya ka soo dagay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Bole, Addis Ababa.
Dr Galaydh oo ah professor ka dhiga cilmiga arimaha bulshada [public affairs] jaamacado kala duwan oo ku yaal dalka Maraykanka, ahna siyaasi caan ah oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka Somaliya, xilkiisii ugu dambeeyeyna uu ahaa raysal wasaaraha Somaliya.
Dr. Galaydh iyo waftiga la socda ayaa ka soo kicitimay mgaalada Buuhoodle, ee dawlad gabladeedka Somaliyeed ee Khaatumo oo dhawaan lagu dhisay magaalada Taleex ee taariikhda ku leh dalka Somaliya.
Dr. Galaydh iyo waftiga la socota ayaa ku hakaday magaalada xarunta u ah dawlada degaanka Somalida Ethiopia ee Jijiga.
Sida ay wararku sheegayaan Dr. Galaydh iyo waftigiisa ayaa kulamo la qaadan doona raysal wasaaraha Ethiopia iyo masuuliyiin sare oo ka tirsan dawlada federalka iyo waliba Jaaliyada Somalida ee ku dhaqan magaalada Addis Ababa.
Dr. Galaydh oo ah nin macalin ah aadna u jecel tacliinta, waxaa uu booqan doonaa Jaamacada caanka ah ee Addis Ababa [Addis University].
Dalka Somaliya oo uu dagaal shacbi ka socday mudo 21 sano ayaa amaan daro badan ku hayey dalkan Ethiopia. Waxaana la filayaa in maamulkan cusub uu wax badan ka qaban doono amaanka xuduuda Ethiopia la wadaago iyo guud ahaan amaanka Somaliya.
Dhinaca kale waxaa magaalada Jijiga ku sugan dawlad gabaleedka Somaliyeed ee Awdal oo ka mid dawlad gabaleedyada laggaga dhawaaqay Somaliya ee xadka la wadaaga Ethiopia.
In kasta oo dawlad gabaleedka Somaliyeed ee Somaliland, oo ka mid ah maamul gabaleedyadii ugu horeeyey dalka Somaliya ayna raali ka ahayn maamuladan cusub, ayaa hadana waxaa wada arimahan dawladaha caalamka.
Dalal aduunka ayaa wada dadaalkoodii ugu dambeeyey ee xal loogu helilahaa dalka Somaliya iyada oo loo la kulminayo maamul gabaleedyada ka jira dalka Somaliya.
Deeqaha Waxbarashada Qayb ma ka Heshaa Qomiyada Somalida Ethiopia?